QAYLA DHAAN: Biyaha Soomaaliya oo la sheegay inay sumaysan yihiin! | Hadalsame Media
Home Wararka QAYLA DHAAN: Biyaha Soomaaliya oo la sheegay inay sumaysan yihiin!
QAYLA DHAAN: Biyaha Soomaaliya oo la sheegay inay sumaysan yihiin!
(Muqdisho) 27 Maajo 2018 – Guddoomiyaha hay’adda Cilmi Baarista Badaha Soomaaliya Admiral Faarax Qare ayaa ka dhawaajiyay war dhiillo leh oo sheegaya in la sumeeyay biyaha dalka Soomaaliya, isagoo farta ku godey in meelo ay ka mid yihiin xeebaha Muqdisho lagu arkay xaddi sun ah oo ku milan biyaha.
Mr Qare ayaa tibaaxay inay samballo u qaadeen shaybaarro ku yaalla dalka Kenya maaddaama aysan hay’ad ahaan haysanin agab casri ah oo lagu baari karo wuxuuna sheegay in loo xaqiijiyay in ay halistaasi jirto.
Sababta sumoowgu ayaa wax laga saarayaa maraakiib fara badan oo qashinka kala duwan ee nukliyeerka iyo haraa kale oo kiimikaad usoo fogeeya kuna shuba biyaha Soomaaliya ee aan ilaalada lahayn.
Faarax Qare ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay in ay arrintan ka feejignaato, wuxuuna warkani imanayaa jeer kunteenarro soo caariyay laga helay xeebaha Ceel Macaan.
Previous articleMan United oo €110m ku rabta €110m (Lazio maxay ka tiri ?)
Next articleItoobiya iyo gacmeheeda qarsoon ee ku jira Soomaaliya